Isaiah 44 NIV – Yesaia 44 ASCB | Biblica
Isaiah 44 NIV – Yesaia 44 ASCB
Jeshurun,44:2 Jeshurun means the upright one, that is, Israel. whom I have chosen.
Israel Deɛ Wapa No
1“Na, afei, Ao Yakob me ɔsomfoɔ,
Israel, deɛ mapa no.
2Sei na Awurade seɛ,
deɛ ɔnwonoo wo, na ɔyɛɛ wo wɔ awotwaa mu,
ɔno na ɔbɛboa wo:
Nsuro, Ao Yakob, me ɔsomfoɔ,
Yeshurun, a mapa noɔ.
3Na mɛhwie nsuo agu asase a awo no so,
ne asutene wɔ asase kesee so;
mɛhwie me Honhom agu wo mma so,
ne me nhyira agu wʼasefoɔ so.
4Wɔbɛfifiri sɛdeɛ ɛserɛ fifiri wɔ mmoa adidibea,
te sɛ mpampuro a ɛwɔ asutene ho.
5Obi bɛka sɛ, ‘Meyɛ Awurade dea’;
ɔfoforɔ bɛfrɛ ne ho sɛ Yakob;
bio ɔfoforɔ bɛtwerɛ ne nsa ho sɛ, ‘Awurade dea,’
na wafa edin Israel.
Ɛyɛ Awurade, Ɛnyɛ Ahoni
6“Sei na Awurade
Israelhene ne Ɔgyefoɔ, Asafo Awurade seɛ:
Mene Ahyɛaseɛ ne Awieeɛ;
Onyankopɔn biara nni hɔ sɛ me.
7Hwan na ɔne me sɛ? Ma ɔmpae mu nka.
Ma ɔnka na ɔnkyerɛ wɔ mʼanim
deɛ asisi firi ɛberɛ a megyee me tete nkurɔfoɔ sii hɔ,
ne deɛ ɛrebɛba,
aane, ma ɔnhyɛ deɛ ɛreba ho nkɔm.
8Mommma mo ho mpopo, monnsuro.
Mampae mu anka yei, manna no adi teteete anaa?
Mone mʼadansefoɔ. Onyankopɔn foforɔ bi ka me ho anaa?
Dabi, Ɔbotan foforɔ bi nni hɔ; mennim obiara.”
9Wɔn a wɔyɛ ahoni nyinaa nka hwee,
na nneɛma a ɛsom wɔn bo no ho nni mfasoɔ.
Wɔn a anka wɔkasa ma wɔn no ani afira;
wɔnnim wɔn ankasa animguaseɛ ho hwee.
10Hwan na ɔsene onyame na ɔgu ohoni,
a ne ho mma no mfasoɔ biara?
11Ɔno ne wɔn a wɔte sɛ no nyinaa anim bɛgu ase;
adwumfoɔ nyɛ hwee sɛ nnipa.
Momma wɔn nyinaa mmɔ mu nsɔre nnyina,
ehu ne animguaseɛ na ɛbɛka wɔn.
12Ɔtomfoɔ fa nʼatondadeɛ
ɔde hyehyɛ egyasramma mu;
ɔde asaeɛ bobɔ so yɛ no ohoni,
ɔde nʼabasamu ahoɔden mmorosoɔ na ɛyɛ;
ɛkɔm de no na ɔyɛ mmrɛ;
ɔnnom nsuo enti ɔtɔ baha.
13Duadwumfoɔ de ahoma susu
na ɔde twerɛdua sensane;
na ɔde fitiɛ yiyi ho
afei ɔde kɔmpase hyɛ no agyiraeɛ.
Ɔsene na ɛyɛ sɛ onipa sɛso,
ɛyɛ sɛ onipa wɔ nʼanimuonyam nyinaa mu,
sɛ wɔde bɛsi abosonnan mu.
anaasɛ ebia ɔfaa kwabɔhɔrɔ anaa odum.
Ɔmaa ɛnyiniiɛ wɔ kwaeɛ mu,
anaa ɔduaa pepeaa, na osutɔ ma ɛnyiniiɛ.
15Ɛyɛ deɛ onipa de sɔ ogya;
ɔde ebi ka ne ho hye,
ɔde bi sɔ ogya to burodo.
Nanso ɔde ebi sene onyame nso na ɔsɔre no;
ɔyɛ ohoni na ɔkoto no.
16Ɔde dua no mu fa sɔ ogya;
ɛso na ɔnoa nʼaduane,
ɔtoto ne nam wɔ so na wawe amee.
Afei ɔka ne ho hye na ɔka sɛ,
Aa! Mahunu ogya; me ho ayɛ me hye.
17Nkaeɛ no ɔde yɛ onyame, ne honi;
ɔkoto no na ɔsɔre no.
Ɔbɔ no mpaeɛ sɛ,
“Gye me; wone me nyame.”
18Wonnim hwee, na wɔnte hwee ase;
wɔasram wɔn ani so enti wɔnhunu adeɛ,
wɔato wɔn adwene mu enti wɔnte hwee ase.
19Obiara nna nnwene ho,
obiara nni nimdeɛ anaa nhunumu a ɔde bɛka sɛ,
“Mede ɛfa sɔɔ ogya;
na mpo metoo burodo wɔ ne gyaframa so;
metotoo nam wɔ so weeɛ.
Ɛsɛ sɛ mede nkaeɛ no yɛ akyiwadeɛ anaa?
Ɛsɛ sɛ mekoto gyentia anaa?”
20Nsõ na ɔdie, nnaadaa akoma ma no yera kwan;
ɔrentumi nye ne ho, anaa ɔrentumi nka sɛ,
“Deɛ mekura wɔ me nsa nifa yi nnyɛ atorɔ anaa?”
21“Kae saa nneɛma yi, Ao, Yakob,
ɛfiri sɛ, woyɛ me ɔsomfoɔ, Ao Israel.
Me na meyɛɛ wo, woyɛ me ɔsomfoɔ;
Ao Israel, me werɛ remfiri wo.
22Mapra wo mfomsoɔ agu te sɛ ɛbɔ
ne wo bɔne te sɛ anɔpa bosuo.
Sane bra me nkyɛn,
ɛfiri sɛ magye wo.”
23Momfa ahosɛpɛ nto dwom, Ao ɔsorosoro,
na Awurade na wayɛ yei.
Mommɔ ose, Ao, asase ase.
Momma nnwontoɔ so, mo mmepɔ,
mo kwaeɛ ne emu nnua nyinaa,
na Awurade agye Yakob,
wada nʼanimuonyam adi wɔ Israel.
24“Sei na Awurade seɛ,
wo Gyefoɔ a ɔnwonoo wo wɔ awotwaa mu no:
deɛ wayɛ nneɛma nyinaa,
deɛ ɔno nko ara trɛɛ ɔsoro mu
deɛ ɔno nko ara twee asase mu,
25deɛ ɔsɛe atorɔ adiyifoɔ nsɛnkyerɛnneɛ
na ɔma nkɔmhyɛfoɔ yɛ nkwaseafoɔ;
deɛ ɔtutu anyansafoɔ adenim guo
na ɔdane no nkwaseasɛm,
26deɛ ɔma nʼasomfoɔ nsɛm ba mu
deɛ ɔhyɛ nʼasomafoɔ nkɔmhyɛ no mu ma,
“deɛ ɔka fa Yerusalem ho sɛ, ‘Wɔbɛtena ne mu,’
ne Yuda nkuro ho sɛ, ‘Wɔbɛkyekyere,’
ne mmubuiɛ ho sɛ, ‘Mɛyɛ no foforɔ,’
27deɛ ɔka kyerɛ nsubunu sɛ, ‘We,
na mɛma wo asutene awewe,’
28deɛ ɔka wɔ Kores ho sɛ, ‘Ɔyɛ me dwanhwɛfoɔ
na ɔbɛwie deɛ mepɛ nyinaa yɛ;
ɔbɛka afa Yerusalem ho sɛ, “Ma wɔnkyekyere bio,”
na waka afa asɔredan no ho sɛ, “Ma wɔnto ne fapem.” ’ ”
ASCB : Yesaia 44